tareenku A na ciidamada ay uga maqsuudeen, fiirsadaan daaqadda oo dibadda ah iyo mahad raaxada ah ee qaadashada waqtigeena. Safrida waa xiiso leh, laakiin mararka qaarkood waxay qaadan kartaa ilaa tamarta oo dhammuba aannu marno, a safar tareen dheer waa fursad in ay xidhi doonto iyo unwind. Samee ugu…
Christmas Suuqyada by tareen kaa caawinaysaa in aad hesho galay ruuxa Christmas la safar mid ka mid ah magaalooyinka ugu fiican Yurub. Raacayso tareen oo aad waayo-aragnimo ugu abid sixir! saldhigyada badan ayaa ku yaalaa wadnaha ee bartamaha magaalada, making traveling by…